लघुवित्तका ग्राहक कसरी छनौट गर्ने ? ~ Banking Khabar
लघुवित्तका ग्राहक कसरी छनौट गर्ने ?
विष्णु ढकाल – लघुवित्त वित्तीय संस्थाको प्रमुख आधार भनेकै तिनका ग्राहक सदस्य हुन् । ग्राहक सदस्यको उचित छनौट गर्न सक्ने लघुवित्त संस्थाले मात्रै दिगो तथा व्यवसायिक वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउन सक्दछन् । अहिले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको बढ्दो संख्या र तीव्र प्रतिष्पर्धाको कारण ग्राहक छनौट गर्ने कार्य अत्यन्तै जटिल बन्दै गइरहेको छ । यसै विषयलाई मध्यनजर गर्दै यहाँ ग्राहक सदस्य छनौट गर्दा अपनाउनुपर्ने केही आधारभूत विषयहरुको बारेमा चर्चा गरिएको छ :
अन्य वित्तीय संस्थामा कारोबार गरिसकेका वा गरिरहेका, लघुवित्तको सेवा सुविधाको बारेमा जानकार रहेका तथा बजार क्षेत्र वा आसपास बसोबास गर्ने, व्यापार व्यवसाय वा कुनै न कुनै आम्दानीमूलक कार्यमा आबद्ध रहेका सदस्यहरुलाई नै धेरै लघुवित्त संस्थाहरुले आप्mनो ग्राहक सदस्य बनाउने गरेको पाइन्छ । यस्ता ग्राहक सदस्यको समूह निर्माण गर्दा यदाकदा केही नयाँ ग्राहक सदस्यहरु पनि आबद्ध हुने गर्दछन् । यसो गर्दा सदस्य थप गर्न सहज हुने, लगानी धेरै गर्न सकिने र लघुवित्त संस्थाहरुले शाखा कार्यालयलाई तोकिदिएको लक्ष्य पनि सजिलै पुरा हुने भएको हुँदा सबैले सहज बाटो अपनाएको पाइन्छ । तर तपाईँ साँच्चै लघुवित्त मार्फत विपन्न तथा पिछडीएका समुदायको पहुँचमा वित्तीय सेवा पुर्याउन चाहनुहुन्छ ? तिनको आर्थिक सामाजिक विकास गर्न चाहनुहुन्छ ? गरीब विपन्नको आधार, भरोसाको केन्द्र बन्न चाहनुहुन्छ ? लघुवित्त संस्थालाई दिगो तथा प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्न चाहनुहुन्छ ? तपाईले यसका लागि सजिलो बाटो छोड्नु पर्ने हुन्छ ।
यहाँहरुलाई लघुवित्त संस्थाहरुले कसरी नयाँ ग्राहक बनाउने अवसर गुमाइरहेका छन् भन्ने कुरा प्रष्ट पार्न एउटा अध्ययन संस्थाले काभ्रे जिल्लाको दनुवार गाउँमा गरेको अध्यनको सानो अंश यहाँ प्रस्तुत गरेको छु । (दनुवार गाउँमा ५५ घर परिवार रहेका छन् जसमध्ये ५० घरपरिवारलाई कुनै न कुनै रुपमा वित्तीय श्रोतको आवश्यकता छ । करिब ३ किलोमिटरको दुरीमा पाँचखाल बजार छ जहाँ करीब ८ वटा लघुवित्त संस्थाका शाखा कार्यालयहरु कार्यरत छन् । दनुवार गाउँका २० घरपरिवार लघुवित्त वित्तीय संस्थासंग आबद्ध छन् र तिनै २० घरपरिवारनै अधिकांश लघुवित्तका ग्राहक सदस्य छन् । ती गाउँका जान्ने बुझ्ने र तुलनात्मक रुपमा सम्पन्न घरपरिवार भित्र पर्दछन् । बाँकी ३० घर परिवारलाई लघुवित्तको आवश्यकता छ । तर उनीहरुमध्ये १७ घरपरिवारलाई लघुवित्त संस्थाको बरेमा कुनै जानकारी छैन । बाँकी १३ घरपरिवारले लघुवित्तको बारेमा धेर थोर सुनेका त छन् तर लघुवित्तको सेवा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । लघुवित्तमा आबद्ध भएका २० घर परिवारसँग अन्तरक्रिया गर्दा उनीहरु बाँकी ३० घर परिवारलाई पनि लघुवित्तको आवश्यकता भएको कुरा स्वीकार त गर्छन् तर उनिहरु कुनै आर्थिक क्रियाकलापमा संग्लन नरहेको, गरीब रहेको र किस्ता तिर्ने श्रोत नभएको कारण उनिहरुलाई समूहमा आबद्ध गर्न नसकिने तर्क गर्छन् । त्यसैले उनीहरु ती घरपरिवारलाई आफ्नो समूहमा राख्न चाहन्नन् । त्यहाँ कार्यरत लघुवित्त संस्थाहरु पनि ती ३० घरपरिवारको सम्पर्कमा पुगेको पाइएन । बरु तीनै लघुवित्तकै सेवा लिईरहेका २० घरपरिवारले नै आफूहरुलाई अन्य लघुवित्त संस्थाहरुले समूहमा आबद्ध हुन बारम्बार भेट्ने र आग्रह गर्ने गरेको कुरा सुनाए । )
लघुवित्त संस्थाहरुले ग्राहक सदस्य छनौट गर्न विभिन्न विधि प्रकृयाहरु अवलम्वन गरिरहेका हुन्छन् । त्यस्ता विधि प्रकृया परिक्षण पश्चात सर्वमान्य भएर आएका हुन्छन् । तसर्थ, तपाईँको संस्थाले अबलम्वन गरेको विधि प्रकृया बमोजिम नै ग्राहक सदस्यको छनौट गर्नुहोस् । किनभने विधि प्रकृया अवलम्वन नगरी ग्राहक सदस्य छनौट गर्नुभयो भने तपाईँले खोजेको ग्राहक नपर्न सक्छ । जसले लघुवित्त कार्यक्रमलाई असर गर्दछ । संसारभर नै लघुवित्तको ग्राहक सदस्य छनौट गर्न पि.डब्लु.आर, पि.आर.ए., आर.आर.ए. लगायतका विधि प्रकृयाहरु अवलम्वन हुँदै आएका छन् । लघुवित्त संस्थाले अवलम्बन गरेका यस्ता विधि प्रकृया भित्रै रहेर ग्राहक सदस्य छनौट गर्नाले लघुवित्तमा देखिने नकारात्मक प्रभावहरुबाट धेरै हदसम्म जोगिन सकिन्छ ।
ग्राहक सदस्यहरुले समयमा कर्जा नतिर्ने, लिएको कर्जा सदुपयोग नगर्ने, धेरै संघसंस्थाबाट कर्जा लिने, एउटै व्यक्तिले धेरै व्यक्तिको कर्जा चलाउने, नियमित बैठक नबस्ने, बैठक संचालनका आधारभूत क्रियाकलापको पालना नगर्ने लगायतका विकृतिहरु अहिले लघुवित्त क्षेत्रमा देखा पर्न थालेका छन् । विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएको निश्कर्षलाई आधार मान्दै तपाईँ यस्ता विकृतिहरुबाट जोगिन चाहनुहुन्छ भने ग्राहक सदस्य छनौट गर्दा निम्न कुराहरुमा ध्यान दिनुहोस् :